Dib u eegistii 11:56, 18 Febraayo 2017 ee Ismail4all (Wadahadal | ku darsasho) (Protected "Af-Ingiriisi" ([Wax ka bedel=Allow only autoconfirmed users] (indefinite) [Wareeji=Allow only autoconfirmed users] (indefinite)))
asal ahaan ka soo jeeda Britain
hadase caalamka oo dhan (fiiri Deegaanada uu gaadhay)
360 - 400milyan (2006)
Luuqad labaad: 400milyan; ajaanib ku ah: 600–700 milyan
Far Latin (Ingiriis Alifbeet)
27 deegaan iyo maamul
Wadanada caalamka ee si xoogan looga hadlo Af-Ingiriiska
Wadanada Af-Ingiriisku ka yahay caan
Afka Ingiriiska (; ) waa luuqad looga hadlo dhowr wadan waxeeyna tahay luqod caalamka aad looga xishmeeyo. Asal ahaan Afka ingiriiska wuxuu ka yimi luqadda Afka Laatiiniga, waxaana lagu alifey wadanka Ingiriiska. Fiditaanka uu Afka ingiriiska ugu fidey dunida waxaa sabab u ah gumeysigii Ingiriisku uu ku gumeystey dunida barkeeda kala bar. Mar walba oo uu wadan gumeysto, Ingiriisku wuxuu ka dhigi jirey afkiisa afka dawladda iyo tan barida.
Wadama lagaga hadlo
Wadamada luqada lagaga hadlo sida afkooda hooyo oo kale waxaa ka mid ah:
Wadamad lagaga hadlo si aan rasmi ahayn:
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Af-Ingiriisi&oldid=166814"